Hadalkii Buubaa Oo Bahdilay Rajadii Soomaaliland Iyo Arin Cusub - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Commentator & Analysis / DJibouti / Somalia / Somaliland | By admin
#Buubaa Iyo Kulankii Bush House
Goobtu waa Djibouti. Waa garoonka diyaaradaha Ambouli. Waa bisha April sannadkuna waa 1994. Kulaylka ayaa soo yara billaabanaya. Waa aroor hore.
Waxaan ka imid London inkasta oo aan markaa magaalada dhowr maalmood joogay.
Waxaan goobta isku aragnay Ismaaciil Maxamuud Hurre Buubbaa, oo markaa lagu yiqiin siyaasadda SNM iyo Wasiir Maaliyadda ee Somaliland in uu noqday.
Wuxuu ii saray in war weyn oo xagga Somaliland ahi uu jiri doono. Inkasta oo aan aad isugu deyay in uu faahfaahin i siiyo, haddana wuxuu ku gaabsaday in uu warka ku dhawaaqi doono Guddoomiyaha SNM, Cabdiraxman Axmed Cali,
Waa Madaxweynihii koowaad ee Somaliland markii ay gooni isu taagtay. Waxaan weydiistay in aan la kulmi karo
Cabdiraxman Axmed Cali. Wuxuu ii sheegay in uu hadda ka dhoofay garoonka oo uu qabtay Addis Ababa. Halkaas oo uu kaga dhawaaqi doono warka oo ah mid aad u culus.
Waxaa maalmahaa Djibouti joogay Maxamed Faarax Caydiid. Waxaan soo xusuustay in Caydiid ay toddobaadkii hore isku soo arkeen Addis Ababa Hoggaamiye Kooxeedyo dhowr ah oo uu ka mid yahay Cabdullaahi Yusuf oo markaa madax ka ahaa Gobollada Woqooyi Bari.
Wuxuu ahaa safarkii ugu horreeyay ee Caydiid uu Dibadda u soo baxay ka dib markii uu Mareykanku ka joojiyay duqeyntii iyo baadigoobka dagaalkii la baxay Blackhawk Down. Caydiid oo baqdin ka qabay Mareykanka ayaa diiday shir ka dhici lahaa Addis Ababa in uu ka qeyb galo.
Diyaarad khaas ah oo loo diray ayaa waxaa wadajir u raacay Wasiir Ethiopian ah iyo Cabdullaahi Yusuf Axmed si ay uga soo qanciyaan in uu shirka ka soo qeyb galo. Wuuna soo raacay.
Markii uu Buubbaa iigu daray in war weyni jiri doono waxaan billaabay in aan xaaladda darso, bal waxa aniga ka weriye ahaan ila gudboon. London iyadana xan ayaa iga soo gaartay ku saabsan qorshaha SNM.
Subixii xigay waxaan ka degey Hargeysa iyada oo aan dadku dareen qabin. Fiidkii ayay ahayd mar aan makhaayad kala casheynayay saaxiibbo markii aan dhegeysannay BBC. Cabdiraxman Axmed Cali wuxuu ku dhawaaqay in laga noqday gooni isu taagga Somaliland.
Sida ay magaaladu uga jawaabtay iyo bannaanbaxyadii ka dhacay ee rabshadaha iyo dhagaxtuurka watay ayaan Hargeysa ka soo tebiyay maalintii xigtay. Siyaasiyiintii aan la kulmay maalintaas waxaa ka mid ahaa Madaxweyne Maxamed Ibraahim Cigaal iyo Mudane Jaamac Maxamed Qaalib oo aan gurigiisa ku booqday.
Wixii berigaa ka dambeeyay inta badan Ismaaciil Buubbaa aad ayuu uga dhex muuqday siyaasadda Soomaaliya. Mar uu Xildhibaan ahaa iyo mar uu xil Wasiir hayay.
Sannadkii 2000, markii Cabdiqaasim Salaad Xasan lagu doortay Carta, Ismaaciil wuxuu ka mid ahaa raggii ugu cadcaddaa ee u taagnaa Ra’iisal Wasaare.
Dowladdii lagu soo dhisay Nairobi ee uu Madaxweyne Cabdullaahi Yusuf hoggaaminayay, oo iyadu ka yara aqoonsi rooneyd dowladdii ka horreysay, wuxuu Ismaaciil Buubbaa mar ka noqday Wasiirka Arrimaha Dibadda.
Xilkaas intii uu hayay ayuu yimid goobteydii shaqada, Bush House, isaga oo ay wehliyaan Allaha u wada naxariistee Yusuf Dirir oo isaga dhowaan lagu dilay Muqdisho iyo Cabdikariin Faarax Laqanyo. Imay soo wargelin oo waxaa laga yaabaa in aanay doonayn in la ogaado in lagu siday baabuur ay leedahay Safaaradda Ethiopia ee London, ballanatana ay iyadu u qabatay.
Anigu markii aan ka war helay waxaan u qabanqaabiyay wareysiyo dhowr ah oo ka dheeraad ah midkii ay u yimaadeen, maaddaama aan ogaa afafka badan ee uu ku hadlo Buubbaa. Ka dib waxaan u qaban qaabiyay in aan la kulanno oo aan isbaro Madaxa Afrika iyo Bariga Dhexe ee BBC, Jerry Timmins, oo aniga madax ii ahaa.
Maaddaama aan socdaalka Wasiirka cidi hore noogu wargelin, waxaan Jerry Timmins ka soo saaray shir uu ku jiray, ka dib markii aan ka codsaday in uu qaabbilo Wasiir Soomaaliyeed oo jooga Xafiiskeyga. Halkaas ayaan shaah ku wada cabnay.
Marnaba ma sii ogeyn in Wasiirku uu fursaddaas uga faa’iideysan doono in uu aniga i dacweeyo.
2015 Hadda Salaadda subax inta aanan tukan ayaan dhegeystay wareysi taariikhi ah oo uu Ismaaciil Buubbaa siiyay Horn Cable. Wareysiga waxaa si wanaagsan u qaaday weriye Cali-Seenyo, oo ah nin cod kar ah.
Waxaan ka fahmay in Ismaaciil Buubbaa uu hadda ka noqday go’aankii uu in ka badan 20 sano ka hor waa April 1994 uu iigu sheegay garoonka dayaaradaha ee Djibouti.
Ismaaciil Buubbaa wuxuu ka gaabsaday in uu afka si buuxda ugu ballaariyo laakiin wuxuu erayo kala duwan ku sheegay in nidaamka Federaalku qaabka uu ku socdo aanuu isaga ugu muuqan mid haya dhabbihii lagu dhisi lahaa Qaran Soomaaliyeed oo hana qaada.
Welibana uu halis u yahay in Soomaaliya uu u horseedo in ay kala burburto, oo ay noqoto dowlado yar yar oo iyagu isu cadow ah iskuna mashquulsan.
Waxaanse qabaa in si aan laab-la-kac ahayn u faaqidno oo u miisaanno sababaha uu noo sheegay iyo sababaha kale ee muuqda laakiin aanuu carrabka ku dhufan. Waxaan qabaa in aan wax iska weydiinno habka Federaalka.
Waxaan qabaa in aan wax iska weydiinno dhaliisha uu u jeediyay Somaliland oo uu ku tilmaamay in dooddeedu ay ku saleysan tahay taariikh ee aanay mustaqbal ku saabsaneyn.
Waxaan qabaa in aan wax iska weydiinno Mas’uuliyiinta Soomaaliyeed ee uu ku tilmaamay in ay oggol yihiin in la noqdo laba dal.
F.G. Dadka dhintay ee aan qormadeyda kusoo qaaday Allah ha u wada naxariisto..
W/Q: Yusuf Garaad Cumar Wasiirkii hore ee arimada Soomaaliya
Published by Araweelo News Network. February 28, 2021,